Puntland: Tahriibkii Badday ku Tuureen, Tabliiqiina Xabsi, Tif-tif Amxaarana madaxweynanimo bay usoo taageen!
Akhristayaal waxaa mar soo foodsaaray raashin iyo sonkor la’aan degmo ka mid ah gobolka Mudug 1980 iyadoo loo aanaynayo dagaalkii udhaxeeyey Itoobiya iyo xulufadeeda, SSDF iyo taliskii Maxamed Siyaad. Mar kasta oo Injiyada la keeno sonkor iyo wixii la mid ah ayaa waxaa habaynimo rarta oo iibsada dadka ushaqeeya injiyada iyo saraakiisha degmadaas joogta. Markasta oo dadweynuhu waayaan sonkortii ayey haweenku af labadii yeeraan iyagoo xattaa u dacwoonaya dadkii meesha mariyey. Waxay ka soo saareen hal-ku- dhigyo ay ka mid ahaayeen:
Jawaan xalay tagay oo tub dheer maray kiish u sidatooy
Marykay waydana war-wareegtooy
War aan loo dirin wal-walaaqdooy
Iilka kii dhigay u dacwootooy.
Ma garanayo in degmadaasi hadaladaas iyagu lahaayeen iyo inay kasoo bowsadeen dad kale oo Soomaaliya jooga. Akhristayaal waxaa i danqiyey oo aan aad uga naxay dhibtii laga sheegay in doomo/doonyo dad ka qaaday gobolka Bari ay dadkii qaar ka mid ah badda ku daadsheen. Waxaa kaloo murugo i gashay, indhahana ilmo ku soo joojiyey mar uu aabbe, Kuuloow Cabi Abokor oo dhalay nin badda lagu tuuray uu codsi u diray madaxda Puntland si ay arrintaas wax uga qabtaan.
Sidaan ognahay dadka la dulmiyey waxaa ka suurtoowda inay af labadi yeeraan mararka qaarkoodna meelo aan munaasib ahayn xal ka raadshaan. Ilaahay aabbahaas Soomaaliyeed samir ha siiyo, wiilkiisii xaq-darrada lagu dilayna ha geeyo Fardoowsa. Waa kuma hogaamiyaha Puntland ee uu u cabanayaa? Yaa haysta qaybta Booliiska ee gobolka Bari? Waa kuwama kuwa doomaha leh ama ganacsatada qaarkood?
Hogaamiyaha Puntland waa ninkii inta dad tahriib ah Gaalkacyo ku xir-xiray oo timihii ka xiiray ay isaga iyo dad mutaclimiin isku sheegaya oo gobolka ka yimidi u duubeen cajalado video ah teleefishino uu Talyaanigu leeyahay. Wuxuu dukaamada Gaalkacyo ku sheegay goobo ay argagixiso lacag siiso. Xijaabkii haweenkana wuxuu ku sheegay inaysan diin ahayn ee inta tusay hablihii hobolada waaberi yiri waa kuwaas waxaan dhaqan u leenahay. Anigu isaga lama yaabbani ee waxaan layaabay miyuusan meesha joogin (Gaalkacyo) qof waxgarad ahi? Waxaa intaas ka daran inuu waydiistay in Maraykanku B-52 iyo Stealth ku garaaco goobo ka mid ah “Puntland”. Been-abuur lagu sameeyey dad musaafur ah oo marti ku ah degaanka ka warrama? Yeey tahay qabiilka kale ee Soomaaliyeed oo saas yeelay? Way jirtaa in Hargeysa waagii Ina Cigaal noolaa dad muslimiin ah Amxaaro loo geeyey. Xamarna saasoo kale way ka dhacday dad loo afduubay Amxaaro iyo Yuhuud laakiin musaafir caadi ah oo cidna dabo joogin wax sidaas yeelay Gaalkacyo ayaa ka jirta.
Waxaa taas ka sii daran waxaa dhowr jeer Gaalkacyo lagu xir-xiray dad tabliiq ah oo u socday inay diin faafiyaan. Waa kuwama tabliiqu? Adduunka ma jirto meel tabliiqa far la saaro xattaa Israel iyo USA maxaa yeelay way yaqaanaan inay yihiin dad badankoodu aan diinta Islaamka si fiican u aqoon. Waxay ogyihiin in aysan diinta Islaamka wax badan u qaban karin bal ay dhici karto inay wax udhimaan aqoon darradooda darteed iyo iyagoo dayacay waqti ay wax ku baran kareen ama xaasaskoodii iyo carruurtoodii meel cidlo ah uga soo dhaqaaqay. Waa sababtaas waxa keentay in tabliiqa lagu arko safaariga Afrika ee duur-joogtu ku badantahay ama Brazil ama Aqalka Cad hortiisa iyadoon cidina saas u fiirin.
Dadka badda lagu tuuro iyo dhimashada caykaas ah waxay ka mid tahay dhimashada ugu qaabka daran ee qof ku dhacda. Waxaan ognahay in uu Islaamku dadka muslimiinta ah ee noocaas udhinta u sheegay in ay helidoonaan naxariis gaara. Waxaa ka mid ah geeridaas laga ducaysto dabka, guriga oo kugu duma, qofka oo biyo ku harqisma/maanshooda, IWM. Xabbadda iyo seeftu waa arrin iska caadi ah oo dadku ku faanaan Islaamka ka hor iyo ka dibba. Islaamka ka hor ceeb bay ku ahayd in qofka hogaamiyaha ahi uu sariir iskaga dhinto khaasatan Carabaha oo jeclaa in isagoo sharafta qabiilkiisa ilaalinaya uu dagaal ku dhinto. Tan kale oo ah in qofka muslimku shahiid ku dhinto iyadu iswaydiin ma leh laakiin Nabigu (SCW) wuxuu baray in muslimiintu Ilaah ka magangalaan dhimashada teeda xun ee ay biyo-liqudu ka mid tahay. Marka maxaad ka filaysaa qofkii qof muslim ah ku tuura bad oo uu halkaas ku dhinto? Sidoo kale ka warran kuwa xukuma dadka degaankaas degen oo canshuurta ka qaata oo aan wax ka qaban arrimahaas?
Waxaa jirta hay’ad ay u bixiyeen PIS oo aan anigu u soo gaabiyo “Puntland/Public intimidation services oo ah hay’adda cabsigelinta dadweynaha. Iyagu waxay dhahaan “Puntland intelligence Services” oo ay ku sheegaan hay’adda sir-doonka ee Puntland! May dhahaan hay’adda baadidoonka tabliiqa/Pakistaaniyiinta. Waa hay’adda rabta in tabliiq Talaviv ama Texes wareega oo aan cidna saas ufiirin ay xirideed ammaan uga helaan Maraykan. Waxaa nasiib darro ah in markasta oo ay dhowr beri haystaanba la sii daayo. Yaa yiraahda sii daaya? Hay’addan waxay ku soo caan-baxday oo xariga looga jaray xiridii nimankii Carabta ahaa ee Boosaaso laga dhoofshay laakiin waa la soo ceshay oo waxaa la yiri ka fiirsada waxaad la soo shirtagteen. Nimanka madaxda u ah waligoodba may arag meel ciidan sirdoon ama booliis ka shaqeeyo. Maalmo ka hor waataas Boosaaso lagu xir-xiray tabliiq. Dowlado shisheeye ayaa yiraahda wixii musliim ah oo aad aragtaan noo xira. Waxay ku sifoobeen gabaygii Cali Dhuux kulahaa:
Doofaaraduu wadan jiruu daya yiraahdaaye
Iyaguna markaasay ku didin diidi mahayaane.
Ceebta ugu darini waa markay dad xirxiraan oo adduunku maqlo in la yiraahdo iska sii daaya kuwaasi waa tabliiqe. Maxay ka dheefayaan ficilka caynkaas ah? C/hi baa madaxweyne ku helaya!
Nin hooyadi qorrax u jiiday aayadiis hoos ma hariyaa? Ma filayo in dadka doomahaas leh uu wax ka qaban karo. Maahan markii ugu horaysay ee la maqlo in dad masaakiin ah badda lagu daadiyo. Waxaa la sheegaa mararka qaarkood in ay bagaashka iyo alaabta haystaan oo ay dadka daadiyaan marka ay doomuhu dhib lasoo kulmaan. Kornaylku dadkaan waa dadkiisii. Waa doomaha lacagaha been-abuurka ah usoo gasha Bari. Akhri wararka sheegaya in lacago been-abuur ah hadda Boosaaso la soo gashay. Lacagaha been-abuurka ah waxaa xalaaleeya qabashada booliska C/hi! Waxaad maqlaysaa bankiga ayaa lagu xareeyey! Bankigu ma xero booliis baa? Yacnii dadkaas masaakiinta ah baa lagu ciyaarayaa. Waa dadka u dhoofsha daroogada iyo waxyaalaha sharci darrada ah ee aan dadka kale loo ogolayn. Ninka u qaabilsan Booliiskuna waa mid isaga usii adeega.
Ma umalaynaysaan in diin iyo dadkeed nacaybkeed cidlo dhacayso oo uu C/hi madaxweyne ku helayo? Ma filayo anigu laakiin waxaan u baqsanahay dadkeyga iyagoo waxaas arka aan wax ka dhihi karin. Waxaad la yaabaysaa waxaad bilo ka hor uga digtay baad arkin iyagoo ka qaylinaya. Waxaa jirtay in aan maqaalo badan uga hadlay xeradii daraawiishta ee la rabay in la gato. Waxaan dadka u sheegay in aan deked iyo jid midna loogu dhisayne hurdada ka kacaan. Haddaad maqlaysaa nin guddiga ku jiray baa yiri lacagtii meel khaldan bay aaday! Media-yihii kornaylka u shaqaynayeyna waxaad maqlaysaa iyagoo haddeer kooyey/yimid. Ma qaybtoodii bay heliwaayeen? Waxaa la sheegaa in xabsiga la dhigay laakiin nasiib bay lahaayeen haddaan loo xiirin oo aan la oran waxay xulufo la yihiin Al-Qaacida. Ilaahay haku mahadiyeen inaysan musaafir ahayn.
Diin nacaybka hogaamiyayaasha reer Puntland qabaan waa C/hi iyo Moorgane waxay usoo jiiday
1. Diin nacayb dartiis dadkaasi waxaa dusha ka fuulay dad dulli ah oo damiino ah.
2. In ay isku dhaceen dad ehel ah oo colaada ka aloosan Kismaayo uu Moorgan mas’uul ka ahaa oo isku diray qabiilooyinkii halkaas degenaa.
3. In ay khiyaamadii Moorgan kusoo noqotay. Kaddib markay nin habaar qaba madax ka dhigteen uu qolo kale qab-qablayaasheed Ilaah Kismaayo u sahlay. Qolyahaas cusub oo waddanka argagixiso ku sheegaya lama arag. Waxaan taleefishanka BBC-da ama kuwa kale ka fiirsaday Caato oo leh Xamar wax argagixiso ah ma joogaan waa markii Kornaylku lahaa Puntland bay joogaan.
4. In ay lumiyeen saaxibadii Bay iyo Bakool markay lakala safteen RRA.
5. In ay lumiyeen saaxiibadoodii Xamar markii C/hi diin nacayb iyo Amxaaro keenid uu sheegtay.
6. In uu ku diray dadweynaha “Somaliland”.
7. Labadaas nin oo inay colaad dadka u soo jiidaan maahee aan waligood khayr looga baran. Hadday meesha sii joogaan waxaa la arkaa in Waqooyina ay Laascaano helaan, reer Koonfurka kalana Gaalkacyo. Waana abaal-marinta dadka diin dagaal usoo istaaga.
Maxamed Saciid Xirsi Morgan Guji....
Dadka “Puntland” hadday rabaan inay khaladkoodii hore saxaan waa inay iska dheereeyaan C/hi iyo Moorgan oo aysan hor keenin meel Soomaali wax ku qaybsanayso. Kama wado qab-qablayaashe kale waa fiicanyihiin laakiin ceeb ma ahan inuu qofku la tasho dadkiisa. Arrintaan waa talo maxaa yeelay ma jiro qof muslim ah oo muslimiin kale dhib la jecel iskaa daa dadkiisee.
Waxaa la leeyahay waxaa wax lagu qaybsanayaa 4.5. Yaa C/hi iyo Moorgan dooranaya? Ka soo qaad 1 saami oo uu qabiilkoodu leeyahay yaa ka dooranaya? Ma Tigree iska dhigaysa ergooyinka qabiilada kale ayaa meesha joogta? Waa arrintii hashu maankayga gaddee ma masaar bay liqday.
In akhlaaqda iyo muslinimadu shaqayso waxaad ku garanaysaa wataas la qaabbilay Al-Xaaji Maxamed Yaasiin-ka u tartamaya jagada madaxweynanimada oo ay qaabileen isimadii shirka joogay oo dhan iyo waliba aqoonyahannadii qabiil kasta oo ay yihiin. C/hi iyo Moorgan mala shiri karaan isimmada iyo aqoonyahannada dhan? Waxaan shakki ku jirin inaysan la shiri karin.
Marka reer “Puntland” waxaan idiin ka baqayey waad is-haysaan. Waxaad diirada saarteen la dagaalanka diinta Ilaah ilaa aad gaarteen in tabliiqii idin ka baxsanwaayo halka Soomaalida kale ay ku jirtay ganacsi, dhul-beerood qabsasho, degaan aysan lahayn degid, IWM. Kama wado dhac baa diintu ogashahay laakiin intii Diinta Ilaah lala dagaali lahaa waxaa ka dhibyar dhaca iyo boobka oo ay Soomaalidu aad u taqaan. Shariftii bay C/hi iyo Moorgan naga qaadeen markii ay nagu lammaaniyeen Amxaaro. Yaa arkay annagoo Amxaaro ammaana. Miyuusan Khaliif Shiikh Maxamuud ahayn ninkii Amxaarada oo uu marti uyahay iska dheereeyey markii la yiri calalada/maryaha ayaad u dhaqdaa oo uusan oran.
Ma martiyo Amxaarada waqiis Habar Majeerteene
Hadday niman dagaal kala mutaan kama macaashaane
Maashaa Allaahuye kufrigu maaro naga waaye
Inaan gaalka (Xabashida) madiidin u ahayn meelna uwada joogin
Ee aan ka maago siduu bahalku (Maxamed Siyaad) kuu maalo
Mashaa’iikhda Eebiyo Allaa ii markhaatiyahe.
Inkastoo Khaliif Sh. Khaliif iyo SSDF ay marti Xabashida u ahaayeen laakiin wuu iska dheereeyey in uu Xabashi ammaano wuxuuna ku sheegay kufri iyo gaalo. Hadda waxaan arkay dad aan diin ku ogaa oo kornaylka ku raacay fikradii ahayd Xabashidu kuwii hore maahan! Waxa igu khasbay talooyinka iyo baraarujinta dadkeyga taas ayey ahayd. Waxaa waagu igu beryey markaan arkay maqaalkii Shaydaanku ma qubaystaa. Wuxuu qoraagu xusay in wixii C/hi kasoo horjeeda ay xabashida necebyihiin. Dadka fikradaas qaba waxay la midyihiin ninkii indhaha la’aa ee uu Ilaah mar araga usoo ceshay oo arkay diiq oo isla markiiba indho belay. Mar kasta oo wax la waydiiyo maroodiba ha ahaadee wuxuu dhahaa intee diiq ka le’eg yahay. Marka waxay caqlisadeen C/hi oo la leeyahay sidii Jeneraalkii Ruushka ahaa ee Afganistan qabtay 1980 ayaa Soomaaliya qabanaya! Haddaad beentay mooddeen arag mid C/Risaaq Xaaji Xuseena ku sheegaya khaa’in iyo nin Soomaaliya burbiriyey, C/hina u qaba halyeey. Run ahaantii labada nin waa ii simanyihiin laakiin C/Risaaq waa cir, C/hina waa carro. Marka cir iyo ciid intee isku jiraan? Wuxuu u qabaa in hadda ay ugu dhowdahay madaxweynanimo markuu maqlay isagoo leh ciidamo shisheeye ayaan dalka keenin. dadkaan waa naceebeeyeen oo caqli-xumo aan bulshooyinkaas lagu aqoon bay na badeen.
Talo ku socota dadka “Puntland” laga soo xuli doono si ay u galaan baarlamaanka oo ay madaxweynaha u doortaan.
Waan ogahay inaydaan lahayn aad ku diiddaan in C/hi xulo xubnahaas haddii xusulkiisu xabaal ka sarreeyana isagaa xulaya marka horta wuu idin dhaarin doonaa ee haka yeelinina. Ilayn isagaa kitaabadii Towxiidka Gaalkacyo ka aruursaday, isagaa xijaabkii dumarka diiday marka inuu Ilaah idin ku dhaarsho dow uma laha. Teeda kale waxaad samaysateen diin kale waa dastuurkee marka iyadana haddaad ku dhaarataan waa shirki kale.
Marka xubnuhuu doorto marka ay codkooda siinayaan madaxweynihii la dooranayo waxaa u fiican inaysan C/hi dooran arrimahan dartood:
1. C/hi cidna madaxweynanimo udooranmayso oo 1- Saami oo qabiilkiisa ka dhaxeeya xattaa kala-bar kama heli karo.
2. Meesha waxaa jooga dad goob-joog ah waxaa yaal kaamarooyin taleefishinno oo maahan meel lagu qarsoomayo marka qofkii is dhihi lahaa cid kuma aragtoow mar kale fekker.
3. Waxaa la idiin bixin doonaa magac ah kuwii C/hi codka siiyey mana filiyo inuu madaxweyne noqonayo marka faa’iido ayaa noogu jirta oo meel dambe oo arrinta “Puntland” ama mid Soomaaliyeed loogu fadhiyo kama hadli doontaan marka la arko karti iyo caqli darradiina.
4. Marka nin walboow turubkaaga la ciyaar inta lagu dooranayo markii lagu doortana haddaad tahay qof bini Aadam ah adaanba isaga dooranayan.
Gabagabo: “talo adaa ku nool ee iyadu kuguma noola”. Haddii Ilaah idmo oo aan gaarno waqtigaas waxa soo bixi doona qofkii riyoonaya oo saar qaba. Marka reer Puntland-noow waxaa meel noo yaal ballan.
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 31, 2003